ဂျူနီယာဝင်း – စာအုပ်အယ်ဒီတာ ကော်လင်းဆဲလ်၏ ဖြောင့်ချက် – MoeMaKa Burmese News & Media
( အတွေးအမြင် အုပ် ၃၀၀ ပြည့်၊ ဇူလိုင်) မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇
စာရေးဆရာရဲ့ဘ၀ကို သူတုို့ဘယ်လို မှတ်ယူကြသလဲဆုိုတာကုို သူက ခံစားပြီး တင်ပြထားတာပါ။ ဒီစာအုပ်ထဲက စာရေးဆရာတွေဟာ နယ်နယ်ရရတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ အွန်လုိုင်းအယ်ဒီတာတွေ၊ နံမယ်ကြီးဘလော့ဂါတွေ၊ စာပေဆုရဘူးတဲ့သူတွေ၊ အပျော်တမ်းစာရေးတဲ့သူတွေ၊ အငြိမ်းစား ဆရာကြီးတွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတွေ၊ သတင်းထောက်တွေ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပြီးတော့ အားလုံးဟာ စာရေးသက် စာရေးအတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်နေကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတုို့ရဲ့ စာတွေကုို စုဆောင်းပြီးတော့ ကော်လင်းဆဲလ်က အခုလုို မိတ်ဆက်ရေးထားတာ ကုို အတွေးအမြင်အမှတ် ၃၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးလုိုက်ပါတယ်။
“စာရေးဆရာအများစုလုိုပဲ ပြောရရင် ကျွန်မဟာ စာရေးဆရာဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး စာရေးတဲ့သူသက်သက်ဖြစ်လာတာပါ လုို့ပြောရမှာပေါ့။ ဒါအမြဲတန်းမှန်ပါတယ်။ နောက်လည်း အမြဲမှန်နေဦးမှာ။ ကျွန်မစာရေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ စာရေးနုိုင်လုို့ ရေးတာပါ။
“ကျွန်မစာအကြာကြီးမရေးဖြစ်ဖူးဆုိုရင် ကျွန်မတော့ သွားတာပဲ။ တကယ့်ကုို သွားပြီ။ စိတ်ဆင်းရဲ စိတ်မကောင်း စိတ်ညစ် အကုန်ဖြစ်တော့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးချင်တာတွေကုို မရေးဘူး သိမ်းမထားဘူး ဒါတွေကုို ဂရုမစုိုက်ဘူး လွှတ်ပစ်လုိုက်တယ်ဆုိုတာတောင်မှ ….. အခုတော့မဟုတ်ပါဘူး…. ကျွန်မအခု သိပ်ပင်ပန်းနေတယ် ပြီးတော့ အရမ်းကုိုအလုပ်များနေတယ် အလုပ်ထဲမှာ သိပ်ကုို ပိမိနေတယ် ဘ၀ကိုလည်းသိပ်စ်ိတ်ကုန်နေတယ်.. ဆုိုတာတောင်မှ… ရေးစရာကလေးပေါ်လာရင်တောင်မှ …. မောင်းထုတ်ပစ်လုိုက်တယ်။ အမှန်တော့လည်း အဲဒီပေါ်လာတာလေးကုို အာရုံစုိုက်မိတယ်.. စကားလုံးတွေအဖြစ် ပြောင်းလုိုက်တယ် ဒီတော့ အဲဒီရေးစရာလေးက ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်.. ဒီတော့ ကျွန်မချရေးတယ်… ကျွန်မစာရေးမှ ဖြစ်တော့မယ်။
“အခုထိပေါ့လေ… ကျွန်မအတွက် သဘောပေါက်လာတာ တစ်ခုက စာရေးတဲ့အလုပ်က ကျွန်မလုပ်စရာတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေတာသက်သက်မဟုတ်ပဲ ကျွန်မဘာကောင်လဲဆုိုတာကုို ပြတဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပုိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာပဲ။ ကျွန်မရဲ့စာရေးတဲ့ဘ၀ဟာ ကျွန်မသက်တန်းတလျောက်လုံးထက် ပိုပြီးတော့တောင် တည်ရှိနေဦးမှာ။
“ကျွန်မ တစ်ခါ တစ်ခါ စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်မဘ၀က စာရေးဆရာဘ၀တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်၊ အိမ်တာဝန်၊ ခြံတာဝန်၊ အလုပ်တာဝန်၊ အိမ်ထောင်တာဝန်တွေအပြင် မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ ညီမ၊ အဒေါ် ဆုိုတဲ့ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ရာ တာဝန်တွေကုိုလည်း ထမ်းဆောင်နေရသေးတယ်။
“ဒီစာအုပ်မှာ ကျွန်မရှာဖွေတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တခြားသော စာရေးဆရာတွေအကြောင်းကုို တွေ့ကြရမယ်။ အော်… ဒါဟာ စာရေးဆရာရဲ့ဘ၀တွေပဲ လုို့ဖြစ်လာရတယ်။ စာရေးခြင်းဆုိုတာရယ်၊ ဘ၀မှာနေထုိုင်ခြင်းဆုိုတာရယ် နှစ်ခုကြားကုို ချိန်ခွင်မှာညှိပေးတယ် လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးခြင်းနဲ့ ဘ၀မှာ နေထုိုင်ခြင်း ဆုိုတဲ့အဲသည်၂ခုကုို ရောစပ်ပေးတာပါ။ ဟုတ်တယ်.. အဲဒီလုို လုပ်ဖုို့က လွယ်တယ်လေ… ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတုို့တွေက စာရေးတဲ့ဘ၀ကုို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျှဝေရင်း၊ ဖောက်သည်ချနေရင်းနဲ့ နေကြည့်ကြတာပေါ့။
“အခုနောက်ကလုိုက်လာမယ့် စာမျက်နှာတွေမှာ စာရေးဆရာအယောက် ၅၀ကျော်ရဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်လာခြင်း၊ စာရေးဆရာဆုိုတာရဲ့ အဓိပ္ဗယ်တွေကုို ကိုယ်ပုိုင်အတွေးအမြင်တွေနဲ့ ဖော်ပြထားကြတယ်။ သတုို့ရဲ့ဖြောင့်ချက်တွေက ကျွန်မကုို ဘားနက် မားလ်လမတ်ဒ် ရဲ့ စကားတစ်ခုကို သတိရစေတယ်။
“သူ့ကုို ကျွန်မက စာရေးခြင်းဟာ သင့်အတွက် ဘယ်လုိုများ အဓိပ္ဗါယ်ရှိစေလဲ လုို့မေးလုိုက်တော့ သူက “ကျွန်တော်ပြောဖုို့စိတ်လှူပ်ရှားလုိုက်တာဗျာ” တဲ့။ ကျွန်မလည်း ဒီစာအုပ်လေးကိုပြုစုတော့ တကယ့်ကို စိတ်လှူပ်ရှားရပါတယ်။ စာဖတ်သူများလည်း စိတ်လှူပ်ရှားကြမှာ သေချာပါတယ်။“
ကော်လင်းဆဲလ်ရဲ့ စာက အဲသည်မှာ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာအုပ် စီးရီးတွေ အများကြီးအောင်မြင်တယ်။ စာရေးဆရာဖြစ်လာဖုို့ ကံတရားအတုိုင်း လုိုက်သွားဖုို့က မလွယ်ပါလားဆုိုတာ စာရေးဆရာတုိုင်းသိကြပါတယ်တဲ့။ သင်ဟာ စာရေးဖုို့စ်ိတ်ထက်သန်သူ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆုိုရင် စာမျက်နာ အလွတ်တစ်ရွက်ကနေ စပေတော့တဲ့။ အဲဒီစကားက မေမေကြီး ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်ပြောဖူးတာ သွားသတိရတယ်။ “စာရွက်လွတ်တွေမြင်ရတာ ကြည့်မရလုို့ စာရေးဆရာဖြစ်လာတာဟေ့” ဆုိုတာလုိုပေါ့။
သူ့စာအုပ်ကုို သူ့ကုိုယ်တုိုင်ကြော်ငြာထားပုံက စာရေးတယ်ဆုိုမှတော့ စာရေးချင်လုို့ေ၇းတာကလွဲပြီး ဘာရှိဦးမလဲ။ ဒီစာအုပ်ထဲက စာရေးဆရာ အယောက် ၅၀ကျော်ဟာ သင့်လုို စာရေးချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲ မဟုတ်လားတဲ့။ သင်ရေးတာတွေ ပုံနှိတ်ခံရပြီးသား ဒါမှမဟုတ် လူတွေကို ချမပြရသေးဘူး ဆုိုပါတော့။ သည်စာအုပ်က သင့်ကုို ကြိုဆုိုပါတယ်။ အားပေးပါတယ်တဲ့။
← ကာတွန်း OKKW – Freedom is not Free
ရွှေပြည်စိုး – သက်ဆိုင်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း →
February 29, 2008 March 31, 2019 admin